घर अमेरिकी फुटबल स्टोरीहरू ब्राजिलियन फुटबल खेलाडीहरू एलन लोरेरो बाल्यकाल कहानी कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो एलन लुरेरो जीवनीले तपाईंलाई उनको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, पत्नी, बच्चाहरू, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो ब्राजिलको कथा हो, उनको बाल्यकालदेखि, जब उनी प्रसिद्ध भए। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेड्न यहाँ वयस्क ग्यालेरीमा बाल्यकाल छ - एलनको बायोको उत्तम सारांश।
एलन लुरेरोको जीवन कथा। उनको जीवन र उदय फोटो हेर्नुहोस्।
हो, फुटबल प्रशंसक के कदर एलनले एभर्टन प्रदान गरेको छ अन्तर्गत संग कार्लो एसेस्टीटी। प्रशंसकको बावजुद, थोरैलाई मात्र ब्राजिलियन जीवन कथा थाहा छ। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
एलन लुरेरो बाल्यकाल कहानी:
सुरू गर्न, उनको पूरा नामहरू छन् एलन मार्क्स लुरेरो। एलन जनवरी १ 8 1991 १ को जनवरी day तारिख जन्मेको थियो उनका बुबाआमा श्रीमती र श्रीमती लुरेरोको लोकप्रिय फुटबल शहर रियो दि जेनेरियो, ब्राजिलमा।
उनको जन्मको रियो डि जनेरियोको सुन्दर शहरमा एक झलक हेर्नुहोस्।
आफ्नो जीवनको प्रारम्भिक दिनहरूमा, एलन फुटबलप्रति आकर्षित भए उनी आफ्ना सँगी देशवासीहरूले खेलमा यति समर्पण देखे पछि। फुटबलमा उसको रुचि उसले खेल्नको लागि पूर्ण अनुमोदनको वारेन्टी लिन सकेन।
धेरै जसो समय, उनको आमाले एक 'अत्यधिक संरक्षण-आमा' को भूमिका खेल्नुभयो र उसलाई फुटबल खेल्न सडकमा जान प्रतिबन्धित गर्नुभयो। त्यसकारण, एलन जसले फुटबलमा आफन्तको चासो जगाउँदछ ऊ आफूले चाहे जति फुटबल खेल्न सक्दैन।
एलन लुरेरो परिवार पृष्ठभूमि:
यद्यपि उनकी आमाले उनको शुरुआती दिनहरूमा उसलाई फुटबलबाट रोक्न खोज्यो, तर चाँडै नै उनलाई उमेर बढ्दै जाँदा साथीलाई खेल्ने अनुमति दिइयो। तपाइँलाई सत्य कुरा भन्न को लागी, कोही पनि ब्राजिल को सडक मा अधिकांश परिवार को लागी फुटबल को प्रेम वश गर्न सक्दैन। त्यसकारण, हामी सुरक्षित रूपमा अनुमान लगाउन सक्छौं कि एलनको फुटबल पराक्रम उसको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा सापेक्ष छ।
एलन लुरेरो परिवार मूल:
तपाईंले सायद जान्नु भएको होला कि कुनै व्यक्तिको जातीयता वा पारिवारिक जड उसको पूरा नामबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै, एलनको मातृत्व र पितृत्व परिवारको नाम क्रमशः मार्कस र लुरेरो ब्राजिलियन सम्पदा हुन्। तसर्थ, उनको पारिवारिक उत्पत्ति ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा पिन गरिएको छ।
उनी ब्राजिलको प्रतिष्ठित शहर रियो दि जेनेरियोका हुन्।
केही वर्ष पहिले, विरोधाभासहरू एलनको मूल देशको सन्दर्भमा आयो। BleacherReport अनुसार, एक पटक फुटबलर इटालीका लागि ब्राजिल छोड्ने कुरा भएको थियो। यो युरोपेली देश मा परिवार जरा पत्ता लगाएको हुन सक्छ?
कसरी एलन लुरेरो आफ्नो फुटबल अभियान शुरू भयो:
सानो बच्चाको रूपमा, एलनले अरू कुनै पनि कुरा भन्दा फुटबलको लागि बढी चासो देखायो। ऊ सायद एक वा दुई दिन फुटबल न खेले बित्न सक्छ। त्यस पछि, एक श्रद्धेय खेलाडी बन्ने उनको सपना ठोस हुन्छ। एलनको दिमागलाई फुटबलमा परिवर्तन गर्न सक्ने केहि पनि थिएन।
तसर्थ, उनका आमाबुबासँग उनलाई मदेराइरा एस्पोर्ट क्ल्यूब (ब्राजिलियन फुटबल टीम रियो दि जेनेरियो शहरमा अवस्थित) सामेल हुन मद्दत गर्नु बाहेक अरू विकल्प थिएन। श्रद्धेय खेलाडी बन्ने आफ्नो अठोटलाई पक्रेर एलनले मादुरेरामा उनलाई सिकाइएको हरेक पाठमा ध्यान दिए।
एलन लोरेरियो प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
केही वर्षको कडा फुटबल प्रशिक्षण पछि, lanलन एक असाधारण जुनियर खेलाडी बने। वास्तवमा, मदुरैराको लागि धेरै म्याच उपस्थितिमा उसको सीप र फुर्तिले धेरै पेशेवर क्लबहरू आकर्षित गर्‍यो।
एलन लौरेरोले १ 17 बर्ष सम्म घटेको समयदेखि नै, उरुग्वे क्लब - डेपोर्टिभो माल्डोनाडोले उनलाई अज्ञात अनुबन्ध शुल्कका लागि हस्ताक्षर गर्‍यो। यसप्रकार, उनले आफ्नो नयाँ जीवन क्लबको साथ आफ्नो व्यवसायिक जीवन शुरू गरे। आगामी खेलाडीले माल्डोनाडोमा धेरै समय बिताएनन् किनभने उनीहरूले उनलाई ब्राजिलमा आधारित क्लब वास्को दा गामामा edण दिएका थिए।
भास्को दा गामामा सर्नुले एलनको पेशेवर क्यारियरको लागि राम्रो अवसर सिर्जना गरेको देखिन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने, उसले तिनीहरूको युवा टीममा खेल्ने समय पायो। भाग्यवस, क्लबको जुनियर टोलीमा धेरै शानदार उपलब्धिहरू गरे पछि, एलनलाई वास्को दा गामाको पहिलो टीममा बढुवा गरियो।
उसलाई हेर्नुहोस् बलको जित गर्न धेरै प्रयास गरिरहनु भएको जुन वास्को दा गामाको लागि खेलिरहेको बेला।
एलन लुरेरो रोड फेम कथा:
के तपाईंलाई थाहा छ?… भिसको दा गामालाई सेरी बी जित्न मद्दत गरेपछि, युवा एलन, दुर्भाग्यवश, गम्भीर चोटपटकबाट ग्रसित थिए। भर्खरै जब उनी प्रख्यात हुँदै थिए भने फुटबलको दुर्भाग्यपूर्ण सीमित बल - चोटपटक - उहाँ समातिए। दुःखको कुरा, चोटको कारण उसले आफ्नो क्लबको लागि राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन।
आफ्ना सँगी देशवासीहरू जस्तै (नेमार र Felipe एन्डरसन) जो पहिले उनको जुत्तामा भएको थियो, lanलनले चोटपटक चोट लाग्ने प्रयास गरे। तसर्थ, उनले स्वास्थ्य क्लब फिर्ता प्राप्त गर्न क्लबको जूनियर टीमसँग निरन्तर तालिम लिए।
एलन लुरेरोको सफलता कहानी:
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, एलनको प्रशिक्षण खेर फालिएको थिएन। वास्तवमा भन्ने हो भने, उनले वास्को दा गामाको पहिलो टीममा फर्केर उल्लेखनीय प्रदर्शन गरे। आफ्नो नमिल्दो कौशलताको लागि धन्यवाद, एलन सजिलै नेटको पछाडि बलिंग रोलिंग पठाउन सक्दछ। तसर्थ, उनले २०११ को सेरी ए टूर्नामेन्ट जित्न आफ्नो टीमलाई मद्दत गरे।
भाग्यवस, एलन एक कुशल खेलाडीलाई भेट्न जाँदै थिए Bruno Fernandes जुन २०१२ मा उनले इटालियन क्लब, उडिनीसँग नयाँ सम्झौतामा छाप लगाए। क्लबमा उनी एक अतुलनीय मिडफिल्डर भए जसको मनपर्दोसँग तुलना गरिएको थियो। पल पोगाबा। केही वर्ष पछि, उनले नेपोलीसँग १० मिलियन डलर हस्तान्तरण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे र आइकनिक खेलाडीहरू जस्ता उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदर्शन गरे immobile, Dzeko, र पलो डाइब्ला सेरी ए मा
स्टारडममा उनको महाकाव्य वृद्धि हेर्नुहोस् (उदनीसदेखि नेपोली सम्म)।
यो जीवनी लेख्ने समय भन्दा छिटो, एलनलाई अंग्रेजी क्लब - एभर्टनमा हस्ताक्षर गरिएको छ। धन्यबाद कार्लो एसेस्टीटी, जसले आफ्नो फुटबल बान्की मन पराउछ, एलनले एभर्टनसँग .21.7 २१.mm को तीन वर्षको सम्झौतामा पुगे। चाँडै ऊ सँगै खेल्दै एक विश्व-स्तरीय कौशल प्रदर्शन गर्न गइरहेको छ जेम्स Rodriguez, जो २०२० मा अंग्रेजी क्लबमा पनि हस्ताक्षर गरिएको थियो।
उनको एभर्टनमा सार्नुको अर्थ उनी कोलम्बियाको आइकनिक प्लेयर जेम्स रोड्रिग्जसँग खेल्ने थियो।
एलन लुरेरो गर्लफ्रेंड / पत्नी को हो?
एक स्थापित खेलाडी को रूप मा, एक राम्रो संख्या को व्यक्ति सँधै एलन लुरेरोको श्रीमती वा प्रेमिका को लागी सोधपुछ गर्छ। तपाईंलाई सत्य कुरा भन्न एलनको एक श्रीमती छ जो अति नै सुन्दर र सबैको सपनाको महिला भनेर वर्णन गर्न सकिन्छ।
यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने, एलनको श्रीमती (तल चित्रमा) थाई भ्यालेन्टीम हुन्। केवल आफ्नो पूर्व टीमका साथीहरु जस्तै (कलिडो कुलिबिले र Lorenzo Insigne), एलन र उनकी श्रीमतीले नोभेम्बर २०१ 2019 मा नेपोलीको पहिलो टीमको विद्रोहबाट उत्पन्न हंगामा बचाउन सँगै मिलेर काम गरे।
एलन लुरेरोको सुन्दर पत्नीलाई भेट्नुहोस्।
जस्तो कि साबुन ओपेरा नाटकहरूमा प्राप्य छ, एलनले प्रायः आफ्नो सुन्दर पत्नी आफ्नो इन्स्टाग्राम ह्यान्डलमा प्रदर्शन गर्छन्। यसबाहेक, थाईसँग उनको विवाहको परिणामस्वरूप अज्ञात संख्यामा बच्चाहरूको जन्म भयो। यद्यपि ब्राजिलियालीले उनको एक छोराको फोटो साझा गरेको छ जब उसले नेपल्स, इटालीमा आफ्नो आठ बर्षको जन्मदिन मनायो।
एलनको वैवाहिक घरको अवलोकन हेर्नुहोस्।
एलन लुरेरो पारिवारिक जीवन तथ्यहरू:
आफ्नो राइज टु फेम पछि पनि, hisलनको परिवार उनको सफलताको दृश्य पछि परेको छ। यो हुन सक्छ कि धेरै मानिसहरूले उहाँप्रति कम चासो देखाए वा यो हो कि उहाँ धेरैले चल्नुभयो? एलन लुरेरोको परिवारको प्रत्येक सदस्यको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्, आफ्ना आमा बुबा बुबाको साथ शुरू गरेर।
एलन लोरेरोकी आमा र बुबाको बारेमा:
यो विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, एलनको आमा र बुबाले उनको नैतिकताको भावनालाई प्रभावित गर्नुभयो। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, तिनकी आमा, रोसाना प्रायः उनीहरुसँग खुशी थिए जब हरेक चोटि उनी फुटबल खेल्न पिचमा जान्छन्। अर्कोतर्फ, एलनको बुबाको बारेमा धेरै जानकारी छैन।
उनको प्रार्थना र सद्भावना सँधै ब्राजिलियाली संग भएको छ। तल हेर्नुहोस्, कसरी रोसाना आफ्नो छोरासँग मनाउँछिन् जब उनी र उनका साथीहरूले कोपा अमेरिका प्रतियोगिता जितेका थिए।
एलन लुरेरो डाइ-हार्ड फ्यान, रोसानालाई भेट्नुहोस्।
एलन लुरेरो भाइबहिनीहरू र आफन्तहरूका बारे:
आफ्नो गोप्य प्रकृतिको कारण, एलन लोरेरोले मिडियासँग आफ्ना भाइबहिनीहरूको बारेमा कडा कुरा गर्यो। सत्य यो हो कि ब्राजिलियाले फुटबल सम्बन्धी मामिलामा मात्र ध्यान दिन्छ जब उनी पत्रकार सम्मेलनमा बोल्छन्। त्यसमा कुनै अचम्म छैन कि त्यहाँ उसको बुवा हजुरबा हजुरआमा को पहिचान को इशारा मा कुनै जानकारी छ।
एभर्टनमा उनको कदम पछि, एलनको प्रशंसकहरू आशा गर्छन् कि उनी अलिकति ढिलो हुन्छन् र आफ्नो बुवा र हजुरआमाको बारेमा केही रोचक विवरणहरू प्रकट गर्दछन्। यदि ब्राजीलका खेलाडीले अझ बढी मान्यता प्राप्त गरे, हामीले सायद धेरै मानिसहरूलाई आफ्नो काका, काकी, भतिजा वा भतिजी भनेर प्रशंसा गरेको देख्नेछौं। केवल भविष्यले हाम्रो जिज्ञासाको जवाफ राख्दछ।
एलन लुरेरो व्यक्तिगत जीवन तथ्य:
तपाईं सबै जो एलन मात्र फुटबल को बारे मा चिन्ता लाग्छ को लागी, तपाईं आफ्नो सिद्धान्तहरु सबै गलत छ। आफ्नो फुटबल को प्रयास को बाहेक, ब्राजिलिया सधैं आफ्नो सुन्दर पत्नी संग आफ्नो अधिकांश समय खर्च गर्दछ। जब उनी त्यहाँ हुन्छन्, उनले प्रायः आफ्नो जीवनको प्रेम संग बिताएको अद्भुत समयको सम्झना गर्न केही स्न्यापशटहरू लिन्छन्।
ऊ आफ्नी श्रीमतीसँग समय बिताउनमा रमाउँछ।
पर्याप्त हास्यास्पद, एलन लुरेरोको विशेषता उसको राशि विपरीत छ - मकर। गोप्य जीवन बिताइसकेका, युवा ब्राजिलियन तल पृथ्वी र दयालु मा तल छ। एक अवसरमा, जब उनका फ्यानहरूले उनलाई तुलना गरे Arturo Vidal, उनले खुशी महसुस गरे र भने;
"Vidal? यो सत्य हो कि हामी थोरै समान हौं, हामीसँग त्यस्तै शैलीका खेलहरू छन्, मैले कडा मेहनत गरिरहनुपर्दछ, म खुशी छु कि मानिसहरू मैले कसरी खेल्दै छन् भनेर खुसी छन्। ”
एलन लुरेरो जीवन शैली तथ्यहरू:
कम लोकप्रिय तर प्रभावशाली मिडफिल्डरको वार्षिक आयले तपाईंलाई चकित पार्नेछ। के तपाईंलाई थाहा छ?… एलन नेपोलीमा €4मिलियन को वार्षिक तलब प्राप्त गर्दछ। यद्यपि, एभर्टनमा € २.28.00.०० मिटरको उनको हस्तान्तरण सौदा निश्चित रूपमा २०२० मा उनको नेट वर्थमा शट भयो। तलको तालिकाले तपाईंलाई यो जीवनी लेख्दा एलनको तलबको पूर्ण विराम दिन्छ।
एलन एभर्टन वेतन ब्रेकडाउन:
प्रति महिना £ 421,954 € 455,700 $ 539,890
प्रति हप्ता £ 97,224 € 105,000 $ 124,399
प्रति घण्टा £ 579 € 625 $ 740
प्रति मिनेट £ 9.7 € 10.4 $ 12.3
प्रति सेकेन्ड £ 0.16 € 0.17 $ 0.21
एलन लुरेरो हाउस र कारहरू:
एलनको जीवनशैलीको बारेमा तपाईंको कल्पनाहरूका चित्रहरूका विपरीत ब्राजिलियनसँग विलासिता प्रदर्शन गर्नमा कुनै रुचि छैन। वास्तवमा, हामी अन्तिम वास्तविकतामा छलफल गर्न सक्दैनौं कि एलनले महँगो घरहरू र धेरै धेरै विदेशी कारहरूको स्वामित्व राख्दछ।
जे होस्, उसको नम्रता र आरक्षित व्यक्तित्वले उहाँलाई आफ्नो सम्पत्ति इन्टरनेटमा प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। पर्याप्त हास्यास्पद, एभर्टनको खेलाडी एक कम्प्याक्ट कार ड्राइभिंग हेराई गरिएको छ। तलको चित्र हेर्नुहोस् र ऊ कुन ब्रान्डको समुद्री यात्रा गर्दैछ भनेर अनुमान लगाउने प्रयास गर्नुहोस्।
यस कार ब्रान्डको लागि तपाईंको उत्तम अनुमान के हो?
एलन लुरेरो अनटोल्ड तथ्यहरू:
अन्यमा तपाइँलाई हाम्रो एलन लोरेरियोको जीवन कथाको पूर्ण प्याकेज दिनको लागि, यहाँ केहि तथ्यहरू छन् जुन तपाइँलाई उनको जीवनीको पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
हामीले रणनीतिक हिसाबले एलनको तलबको विश्लेषणलाई घडीको टिकटमा राख्यौं। ब्राजिलियनले कति कमाएको छ भनेर आफैंमा पत्ता लगाउनुहोस् (एभर्टन वेतन तथ्या )्क) जब तपाईं यहाँ आउनु भएको छ।
यो के हो एलन लुरेरियोले तपाईलाई यो पृष्ठ अवलोकन गर्न शुरू गरेदेखि एभर्टनमा कमाएको छ।
तथ्य # १: एलन लुरेरोको ट्याटूहरू:
के तपाईंलाई थाहा छ?… एभर्टन मिडफिल्डर आफ्नो शरीरमा गोद लगाउन चाहान्छन्। जस्तै Zlatan Ibrahimovic, एलन आफ्नो शरीर मा टैटू को एक धेरै शाईएको छ। तल एलन लुरेरियोको ट्याटू देखाउँदछ।
उसको शरीर ट्याटूले भरिएको छ।
तथ्य # १: एलन लुरेरो खेल शैली:
एक असाधारण मिडफिल्डरको रूपमा, एलनले धेरै आश्चर्यजनक कौशलहरू प्रदर्शन गरिसकेका छन, हेर्नुहोस्। पिचमा, ऊ सामान्यतया केन्द्रीय वा डिफेन्सि। मिडफिल्डरको रूपमा खेल्दछ। धेरै जसो अवस्थाहरूमा, खेलको प्रवाहले मिडफील्डबाट आक्रमणमा स्विच गर्न उनलाई वारेन्टी दिन सक्छ।
आँखासँग मिल्ने भन्दा पनि उसको खेल्ने बान्कीमा अरू धेरै कुरा छन्। हो, उहाँ कडा र फुर्तिलो हुनुहुन्छ। तसर्थ, उसले बललाई सजिलैसँग सामना गर्न र रोक्नको लागि आफ्नो क्षमताको फाइदा लिन्छ। तल आइकोनिक बिरूद्ध एलनको ट्याकलहरूको तस्वीर छ नेमार जूनियर नेपोली र PSG बीचको खेलमा
उहाँ नेमारलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त सामर्थी हुनुहुन्छ।
यद्यपि धेरै फुटबल फ्यानहरू जहिले पनि ब्राजिलियन खेलाडीको प्रशंसा गाउँदैनन्, उनी पिचमा हेर्नका लागि एक प्रतिमा हुन्। फिफाले पनि उनको football pr को समग्र मूल्या rating्कन दिने हदसम्म उसको फुटबल शक्तिलाई अनुमोदन गरेको छ। तलको चित्रमा उसको फिफा तथ्या .्कहरू राम्ररी हेर्नुहोस्।
उहाँसँग पर्याप्त फिफा रेटिंग छ।
पुरा नाम: एलन मार्क्स लुरेरो
निक नाम: एलन लुरेरो
जन्म मिति: 8th जनवरी 1991
जन्मस्थान: रियो डी जनेरियो, ब्राजील
पिता: श्री लुरेरो
आमा: रोजाना मार्क्स
पत्नी: थाई भलेन्टीम
वेतन: € ,,5,468,400,,XNUMX०० (वार्षिक)
एलन लूरेरोको जीवनी हामीलाई सिकाउँछ कि निरपेक्ष रचना र हाम्रो प्रयासमा समर्पणले परिणाम दिनेछ। जहाँसम्म धेरै व्यक्ति एलनको बारेमा थोरै कुरा गर्छन्, उनले प्रतिष्ठित टोलीलाई उनीहरूको साथ आफ्नो क्यारियर जीवनको बखत सफलताको एक उच्च उचाइ प्राप्त गर्न मद्दत गरेको छ। यसमा अचम्म मान्नुपर्दैन कि उसले एक हो भन्ने सम्मान राख्छ प्राविधिक रूपमा प्रतिभाशाली विध्वंसक जो एक पटक bossed पल पोगाबा.
अन्तमा, Lifebogger को सम्पूर्ण टीम तपाईलाई एलन लुरेरोको जीवन कहानी पढ्नमा खर्च गरेको समयको लागि धन्यवाद दिन्छ। कृपया तल टिप्पणी बक्समा एलनको फुटबल शैलीको खेलको बारेमा तपाईंको राय साझा गर्नुहोस्। साथै, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईंले बायोमा सही जस्तो देखिने कुनै कुरा फेला पार्नुभएन भने।